शक्ति बल मा अनलाइन Play । लाखौं विन । : PlayLotteryOnline.info 2020
->>> अमेरिका बिजुली बल बारेमा थप जानकारी
बिजुली बल अमेरिका उत्पत्ति , जो MUSL लोट्टो को अन्तर्राष्ट्रिय संघ , व्यवस्थित छ । चित्र 22:59 अमेरिकी पूर्वी समय मा हरेक बुधवार र हरेक शनिबार हो , केन्द्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका मा बिजुली बल लटरी 21:59 मा हो । आकर्षण भाग्यशाली संख्या बिजुली बल पश्चिम डेसमोइन्स , Iowa मा MUSL मा आयोजित छ ।
के जीत के गर्न ? यो सजिलो छ ! यो कुरा एकदमै उपयुक्त 69 संख्या बाहिर संख्या5, प्लस 26 संख्या देखि एक नम्बर चयन गरिएको छ । अतिरिक्त नम्बर - 26 को 1 - को PowerBall छ । लाल बलहरु 1 देखि 26 को संख्या हो, जबकि सफेद बल , 1 देखि 69 नम्बर हो
को Powerball मा न्यूनतम संचय $ 20 मिलियन छ । कुनै एक सबै को संख्या पाएँ भने कुनै पनि संचय , , यो जति $5लाख बढ्छ । शक्ति बल Winning बराबर किस्तामा 29 वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी छ । सबै सङ्ख्याहरू ठीक केही मानिसहरू बाहिर एक्लो भने , यो विजय उन केहि मान्छे को लागि बराबर भागहरु मा विभाजित छ । शक्ति बल मा सबै भन्दा ठूलो संचय $ 365 000 000 लाख थियो । 8 मान्छे को विभाजित जो यो विशाल राशि Win , 18.02.2006 थियो ।
शक्ति बल खेल्न कसरी ?
तपाईं कुपन बिजुली बल को बिक्री संलग्न साइट मा आफ्नो खाता सेट अप गर्नु पर्छ । अर्को सूचीबद्ध बैनर मा क्लिक गरेर , तपाईं तुरुन्तै र सजिलै गर्न सक्छौ ।
तपाईं आफ्नो खाता मा प्रवेश गर्दा , तपाईं भाग्यशाली संख्या खेल्न र भविष्यवाणी गर्न चाहनुहुन्छ जसमा लटरी चयन ।
आफ्नो चयन लटरी संख्या को मिति र ड्र को सङ्ख्या चयन गर्नुहोस् ।
को " स्थापना थप्नुहोस " थिच्नुहोस् । बाजी थपिएको छ र तपाईं शर्त जारी राख्न वा भुक्तानी गर्न जान सक्छ ।
तपाईंले चयन भएपछि सबै प्रतिष्ठानहरु " जारी " थिच्नुहोस् ।
राखिन्छ शर्त लागि रह ।
भुक्तानी पछि तपाईं एक इमेल पुष्टि प्राप्त र बोट निहित हुनेछ ।